Finday tranga ho an'ny iPhone 7 tranga Slider sy 7 Plus, Wallet fanoloana Fa iPhone 7 raharaha mifanaraka karatra roa karatra
Supply Fahaizana: 10000 Piece isan'andro
Fandoavam-bola Terms: T / T PayPal
oem iml biby roa raharaha sarimihetsika finday
IML Product Description sy Feature:
Ara-nofo: PET horonantsary + TPU, PC, PC + ABS
IML dia afaka hahatsapa teknolojia fiteny maro samy hafa, dia azo ovana Color mora kokoa amin'ny filaminana iray.
Ampidiro ny fitaovana rehetra dia avy any Bayer Alemaina.
IML teknolojia manana ny fiantraikany tena tsara fanoherana.
Pattern ao anatin'ny raharaha ny telefaonina dia afaka foana ela lefy mihitsy.
More teknolojia finday safidy ho an'ny raharaha. Fa lamba, hoditra, bararata, hazo, Flash fahefana, sns
OEM sy ODM tsy ampy aminay.
Nahoana no nifidy antsika:
1.10years IML teknolojia mpanamboatra. Manana tsara R & D departemanta. Afaka manao ny lasitra araka ny fepetra.
2.More orinasa mifaninana vidiny mba ho azo antoka ny tombony mpividy.
3.Professional pd & resadresaka departemanta afaka manao antoka ny lahateny fohy ny fotoana sy ny fanaraha-maso hentitra ny toetra ho an'ny vokatra.
4.Complete sampan-draharaha tsy hanao ny lasitra ny fonosana. Ny dingana rehetra dia ho vita tsy miankina noho ny orinasa.
1.High quality: sary rehetra dia ho tanteraka ny hentitra hijery roa sosona.
2.Best fanaterana ny fotoana: Ho ho fanaraha-maso noho ny mpanamboatra tanteraka
3.Competitive Price: vidiny rehetra dia ho ofisialy, tsarain'ny injeniera departemanta.
4.OEM endrika: 10years traikefa OEM & ODM mpanamboatra
HXS Ltd, IML / IMD teknolojia fanamboarana mpitarika!
Shenzhen HXS ny teknolojia Ltd, naorina tamin'ny taona 2009, dia ny matihanina mpanamboatra mba hifantoka amin'ny teknolojia IML vokatra. Ny vokatra lehibe manarona ny faritra ao anatin'izany raharaha IML finday, telefaonina IML tontonana, IML nomerika vokatra tontonana, IML TOKATRANO ENTIN tontonana, fitaovana ara-pitsaboana tontonana, sns.
Ny orinasa manarona 3000 metatra toradroa faritra, dia miorina ao Henggang Town, Longgang District ao Shenzhen City, Sina. Near by Liuyue garan'ny lalamby ambanin'ny tany. Fitaterana mety tsara ho mpanjifa mba hitsidika ny orinasa. Ny orinasa dia afaka hamita ny dingana ara-teknolojia miaraka amin'ny vokatra tsy miankina. Ny famokarana Ampidiro koronosy sampan-draharahan'ny, fanontam-pirinty sampan-draharaha, namorona sampan-draharaha, tsindrona sampan-draharaha, fisafoana department.our mpiasa efa ho 300 ny olona. koa tsara indrindra sy ny fitantanana ara-teknika talenta.
Ankehitriny dia efa maro ny orinasa malaza fiaraha-miasa maharitra mpiara-miasa, toy ny LG, OPPO, BYD, INCASE, TTPOD, LAWA, Kate Spade, sns.
"Hanome ny tsara indrindra sy ny famoronana vokatra tsara ho an'ny mpanjifa" no tena lasibatry sy mbola misisika ny hanao izay rehetra ny time.Welcome mba hamangy ny orinasa ary manao lava fiaraha-miasa sy Win Win hoavy.
Inona no atao hoe IML?
IML (In-bobongolo Label) dia tranga vaovao teknolojia finday fa pirinty ny endriky ny PET horonantsary ho tsindrona.
IML dia ny fanavaozana fanontana IMD (In-hamolavola Decoration)
Isika no matihanina IML mpanamboatra mba hifantoka amin'ny IML teknolojia nandritra ny 10 taona traikefa. Avy koronosy ny fanontam-pirinty, fiforonana, tsindrona, Inspection, fonosana. Ny dingana rehetra dia ho tanteraka noho ny mpanamboatra.
Inona no novokarina ho an'ny?
Isika tena mamokatra ny andian-dahatsoratra IML vokatra. Anisan'izany ny raharaha IML finday, telefaonina IML tontonana, IML nomerika tontonana, marani-tsaina IML fiambenana panel.IML fahefana banky tontonana, milina fanasan-damba IML tontonana, IML herinaratra cooker tontonana, sns
Afaka manome ny OEM fanompoana?
Isika no matihanina OEM mpanamboatra nandritra ny folo taona tany IML teknolojia orinasa.
Mba andefaso ny fepetra famolavolana sary rakitra amintsika mba hanao ny lasitra ho anareo.
Ahoana no ahafahantsika mahazo ny santionany?
Fa ny amin'izao fotoana izao, dia ho afaka santionany noho ny mpanjifa sy ny fanontam-pirinty fepetra santionany dia mila mandoa.
Ahoana ny momba ny fanaterana ny fotoana?
2-3days ny santionany sy ny 3-5days ho an'ny filaminana. Ny entana lehibe dia ho araka ny famarana.
Previous: IMD electroplated maro loko tpu + PC tranga tariby andian-dahatsoratra ho an'ny iPhone
Manaraka: tonga vaovao tsy miankina oem hoditra bobongolo tranga tariby andian-dahatsoratra ho an'ny iPhone
China Phone Raharaha 7 Plus
Iphone7 Phone Raharaha
Phone Accessories Fa Iphone7
Phone Raharaha 7
Phone Raharaha 7 Plus
Phone Case ho an'ny iPhone 7 Plus
Tpu Iphone 7 raharaha
Mamiratra tonga vaovao iml PC tpu raharaha finday
Alibaba China mpanamboatra finday Accessories Oe ...